Madaxweyne Xassan Hogaamiye wakhti gaaban dhumiyay taageeradii beesha caalamka (Warbixin)
Oslo, Wacaal Media.
Madaxweyne Xassan oo xilka loo dhaarinayo
Maxaa sababay eedaymaha tirada beelay ee jiha kasta ka hareereeyay madaxweynaha dowlada socod baradka ah ee Soomaliya mudane Xassan Sheekh Maxamuud, xilli uu xafiiska soo hayay wakhti aan ka badnayn sanad iyo bilo, isla markaasna taageero tiro beeshay uu ka helayay wadamada caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka?
Ka hor Faaladeena kumuu ahaa mudane Xassan sidee buuse xilka ku hantay?
Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud waxaa uu kamid ahaa ragga hormuudka u ahaa waxbrashada magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay bur burkii dowladii dhexe ee Somalia, waxaana uu si nasiiib ah ku hantay jagada ugu saraysa dalka ay colaaduhu la dageen xilli kala guur ah, isaga oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dowlad rasmi oo Somaliya ay yeelato dagaalkii sokeeye kadib, kaas oo lagu doortay dalka gudihiisa.
Guud ahaan Shacabka Soomaliyeed waxay si diiran u soo dhaweeyeen hogaanka cusub waxayna aamineen inay heleen hogaamiyihii ay mudada u soo basaaseen, dibna u soo noolayn lahaa qarankii caalamku u yaqaanay Janadii bur burtay, walow mudooyinkii dambe loogu yeeri jiray bohoshii mucaawinada, si kastaba marka laga yimaado taageerada gudaha dalka, waxaa sidookale is qabsaday xafladaha jaaliyadaha dibada New Zealand ilaa Alaska.
Madaxweyne Xassan wuxuu fursad u helay taageero xad dhaaf oo aanay heli jirin xukuumadihii kumeel gaarka ahaa, waxaa aqoonsi buuxa siiyay dowladaha Maraykanka iyo kuwa midowga Yurub, sidookale dowladda uu Xassan hogaamiyo waxay dib ugu soo noqotay ururada caalamiga ah sida bangiga aduunka (World Bank) iyo hay’ada lacagta aduunka (IMF) waxaa sidookale jamciyada quruumaha ka dhexeysa ay ka khafiifisay cuna qabatayntii hubka saarnayd Soomaliya.
Maxaa is bedelay
Ra’isul Wasare xigeen Ridwan Iyo Ra’isul Wasare Cabdiwali – Adan Cade Airport
Waxkhti kooban kadib doorashadii madaxweynaha waxaa banaanka u soo shaacbaxay in talada xafiiska looga arimiyo dalka Soomaliya ee Villa Somaliya aanay ka go’in hogaamiyihii wakiilada shacabku doorteen ee mudane Xassan Sheekh, balse talada ugu dambeysa ay leeyihiin kooxda Dam Jadiid oo xiligaas ka hor aan aqoon loo lahayn.
Waxaa madaxweyne Xassan lagu eedeeyay inuu la wareegay shaqadii wasiirka koowaad oo xiligaas uu u doortay ra’iisul wasaarihii baarlamaanku eryeen mudane Saacid Shirdoon, sidookale waxaa madaxweynaha lagu eedeeyay inuusan raali ka ahayn nidaamkii lagu doortay iyo waxa uu qorayo dastuurka dowlada federalka ah ee Soomaliya, waxaana tusaale loogu soo qaatay sidiii uu uga horyimid shirkii Kismaayo ee lagu soo dhisayay maamulka Jubba, walow mar dambe lagu khasbay inuu aqoonsado.
Waxaa xumaaday xiriirkii wada shaqayn ee u dhexeeyay dowlada iyo qaar kamid ah maamuladii dalka sida maamulka Puntland oo ku eedeeyay dowlada federalka ahi inay wax ka bedeshay dastuurkii kumel gaarka ahaa ee dalka ee lagu doortay mudane Xassan Sheekh.
Fadeedaxii ugu weyneyd ee soo wajahday madaxweyne Xassan waxay timid kadib markii gabadhii ugu horeysay ee gudoomiye ka noqota bangiga dhexe ee Soomaliya , iska casishay xilkaas wakhti aanay xafiiska joogin 7 asbuuc oo kaliya.
Haweenaydaas oo lagu magacaabo Yusra Abraar ayaa sabab uga dhigtay casilaadeeda in koox ka agdhow madaxweyna ay ku khasbeen in hanti qaranku leeyahay oo dibada taal ay ku wareejiso shirkad gaar loo leeyahay, hadii aanay saas yeelina nafteedu halis galayso, sida ay qortay wakaalada wararka ee Rauters oo heshay koobiga E-mailkii marwo Yusra u dirtay madaxaweynaha wakhtigaas oo ay ku sugneyd magaalada Dubai.
Marwo Yusra Abraar waxay sheegtay in wasiirkii hore ee arimaha dibada marwo Fowsiyo oo madaxweynaha jaal la ahayd xiligaas ay qayb ka ahayd musuqa hareeyay dowlada ayna ku cadaadisay in madaxweynaha Account looga furo Dubai si loo soo mariyo dhaqaalaha loogu deeqayo dowlada ka hor inta aanay kusoo dhicin bangiga dhexe ee dalka.
Iscasilaadii Yusra waxay timid wakhti beesha caalamku ugu deeqday dowlada Soomaliya aduun gaaraya 2.5 bilyan doolar, waxaana maalmo kadib garoonka diyaarada ee sida aadka loo ilaaliyo ee magaalada Muqdisho kulan sacado qaatay ku yeeshay madaxweyne Xassan Sheekh iyo safiirada Maraykanka, Norway iyo Sweden waxayna u sheegeen madaxeynaha in kalsoonidii ay ku qabeen dhaawacantahay sida uu Reuters u sheegay diblumaasi reer galbeeda.
Sidookale madaxweynaha iyo xertiisa Dam Jadiid waxaa lagu eedeeyay inay dhaqaale fara badan u adeegsadeen xilka qaadistii Ra’iisul Wasarihii hore Saacid oo loo diiday inuu iska difaaco eedaymihii ba’naa ee uga yimid xubanaha baarlamaanka kuwaas oo la aaminsanaa in laga soo jiscimay Villa Somaliya.
Waxaa mar labaad cadaatay awooda muuqata ee ururka Dam Jadiid, kadib markii madaxweynuhu soo magacaay Ra’iisul Wasaraha iminka xafiiska jooga ee Cabdiwali oo laga keenay Sacuudiga garoonka diyaarada Muqdishana uu ka soo kaxeeyay ninka hadda u ah ra’iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka diinta mudane Ridwaan oo kamid ah saraakiisha sar sare ee ururkaas, sida ka muuqata sawirka sare.
Ra’iisul Wasare Cabdiwali waxay ku qaadatay wakhti kadaban intii dastuurku siinayay inuu soo dhiso gole wasiiro oo kabadan ku dhowaad saddex jibaar middii ka horraysay wuxuuna tii hore kala haray labo wasiir oo kaliya, kuwaas oo ahaa ragii xafiiska weydaariyay Ra’iisul Wasaarihii la eryay balse aan loo baroor diiqin, maadama xilli horeba xilkiisii lagala wareegay,
Cabdiwali laftirkiisa waxaa la aaminsantahay in madaxtooyada loogu dhiibay liiska uu ku dhawaaqay saacado ka hor xilliga waabariga, waxaana waagu markii uu baryay xukuumada cusubi la kulantaya dhaleecayn dhanka tirada iyo tayada ah, laakiin falanqeeyayaashu siday leeyihiin wasiirrada cusub oo xilka loo dhaariyay waxay wajahayaan isla caqabadihii keenay in la rido xukuumaddii hore.
Waxay ahayd maalmo kadib riditaankii Saacid markii xarunta madaxtooyada dhexdeeda lagu qarxiyay gaarigiisa Xildhibaan Maxamed Warsame Faysal oo ahaa gudoomiyihii golihii difaacayay ra’iisul wasarihii la riday, isla markaasna erayo kul kulul hawada u mariyay ururka Dam jadiid, qaar kamida xildhibaanada ayaana shaki ka muujiyay dilka xildhibaanka.
Waxaa intaas bar barsocday cabashada ka soo yeeraysay gobolada dalka iyo in dowladdu aanay waxba ka qaban arimihii amniga iyo kuwii bulshada, sidookale dagaal beedeedyo ka dhacay qaar kamid ah gobolada waxaana ciidanka dowlada lagu eedeeyay inay ka qayb galeen dagaalada sokeeye.
Dhanka kale dowlada Maraykanka oo ahayd saaxiibka ugu weyn ee madaxweyne Xassan Sheekh waxay u jeedisay eedayntii ugu darnayd laba asbuuc ka hor, James Clapper oo ah agaasimaha sirdoonka Maraykanka oo warbixin siinayay aqalka Sanete-ka Maraykanka ayaa dhaliil ba’an u jeediyay madaxweyne Xassan.
Hadaladii James Clapper waxaa kamid ahaa “Dowlada Soomaaliya waxaa hareeyey aaminaad daro Siyaasadeed iyo isqabqabsi dhexdooda ah, Hay’adihii Dowliga ahaa oo aan si wanaagsan u diyaarsaneyn taas oo ku salaysan maamul yari siyaasadeed, hogaanka dowlada Madaxweyne Xasan waa nin liita dhinaca hogaanka iyo siyaasada.
Waxaa intaas oo dhan waxba kama jiraan kadhigay markii asbuucaan dhexdiida warbixin ay soo saareen gudiga qaramada midoobay u qaabilsan daba galka hubka Soomaliya ay shegeen in hubkii dowlada qayb kamid ah uu u gacan galay dagaalyahana Al-Shabaab, iyagoona si gooniya u eedeyay madaxweynaha rag qaraabadiisa ah oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha inay xiriir la leyihiin ururka Al-Shabaab. Warbixinta ayaa ku baaqaysa in dib loogu soo celiyo cuna qabatayntii hubka ee saarnayd Soomaaliya, ee la khafiifiyay sanadkii hore.
Eedayn taas mid lamid ah waxaa isla asbuucaan dowlada u jeediyay hay’ada u dooda xuquuqda aamaha ee Human Righs Watch waxayna warbixin ka kooban 72 bog ku sheegtay in kufsiga uu caadi ka yahay magaalada Muqdisho ee xarunta dowlada.
Wasiirka arimaha dibada ee Somaliya Dr Bayle oo wax laga weydiiyay eedaymaha la xiriira hubkii dowlada in uu Shabaab u gacan galay ayaa ku soo koobay in arintaas la buun buuniyay oo waxbadan aanay sax ka ahayn dowladuna arimahaas guddi u saari doonto.
Dhanka kale xilli habeenadii la soo dhaafay magaalada caasimada ah ee Muqdisho laga seexan waayay daryanka madaaficda ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray xafiiska dalka Ingiriiska u qaabilsan arimaha dibada iyo barwaaqa sooranka waxaa uu muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan dalka Somaliya, wuxuuna kula taliyay inay iskaga soo baxaan inta ku sugan gudaha dalkaas.
Geesta kale waxaa fajac ku noqotay dad badan markii isla asbuucaan dowlada Turkiga ay sheegtay inay joojisay dhaqaale gaaraya 4.5 malyan oo doolar oo bilkasta si toos ah ay u siin jidhay dowlada Somaliya, xilli madaxweyne Xassan Sheekh uu ku sugnaa dalka Turkiga oo la sheegay inuu ku qaadanayo nasiino, maadaama mudooyinkii ugu dambeeyay uu la liitay (depression) ama isku buuq uu ka qaaday riditaankii xukuumadii Saacid iyo soodhisidii xukuumada Cabdiwel tiiyoo ay u raacday eedaymahaan xad dhaafka ah.
Xogo kale oo aan wali la xaqiijin ayaa sheegaya in dowlada iskutaga Imaaraadka Carabta ay ka joojisay dowlada Soomaliya aduun gaaraya 2.5 milyan doolar oo bilkasta si toosa ay u siin jidhay dowlada Somaliya. Sikastaba ha ahaatee waxaan shakki kujirin in madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud uu dhumiyay kalsoonidii ay ku qabeen saxiibada dowladiisa kuwaas oo ka tageeri jiray dhankasta, sidookale waxaa hoos u dhacay hankii sare ee shacabka Soomaliyeed ay ku qabeen hogaamiyahooda, waxaana la aaminsayahay in halka daadku uga soo galay madaxweyne Xassan ay tahay xertiisa Dam jadiid oo ah rag maamul iyo dowladnimo aan aqoon u lahayn balse xarfaan ku aha ururada loo yaqan NGO’s-ka.
Madaxweyne Xassan Sheekh oo ah nin aqoonyahan ah isla markaasna dabeecad wanaagsan lama garan karo inuu ka dhex bixi doono xertiisa iyo inkale bacmadamaa muddo kooban oo sanad iyo bar ah uu ku wayay in badan taageeradii caalamka iyo midii gudaha, dad badan baase qaba in madaxweynu waajibaadkiisa gudan karo hadii uu helo lataliyaal wadaniyiin Soomaliyeed ah, kuwaas oo danta qaranka ka hormariya midooda khaaska ah.
Maxaa laga damacsanyahay dowlada Soomaliya ee madaxweyne Xassan uu hogaamiyo?
Madaxweyne Xasan iyo Saaxiibkiis Faarax oo la aaminsayahay inuu yahay ninka gaanjooga siyaasada dalka
Inkasta oo aan saadaal dhab ah laga bixin karin waxa dhici kara misana waxaan shaki ku jirin in wakhtigii mudane madaxwyene Xassan Sheekh xafiiska loo idmay ay ka dhimantay laba sano iyo bar, balse waxaa la isku raacsan yahay wakhti kooban ee u haray iyo waajibaadka laga sugayo oo ay kamid tahay xoraynta gobolada, hirgelinta nimaadka federalka iyo in 2016-ka wadanka oo dhan ay ka qabsoonto doorasho shacab u dareeraan inaysan u muuqan suurta gal.
Khubarada daba gura siyaasada Soomalida oo saadaal hor dhac ah ka bixay waxay muujinayaan in laba qodob midkood laga yaabo inay so jeediyaan wadama daneeya arimaha Soomaliya oo reer galabeedku horkacaan kuwaas oo kar kariya siyaasada Somaliya.
Qodobka koowaad in madaxweynaha lagu cadaadiyo inuu is casilo isla markaasna baarlamaanku doortaan madaxweyne cusub oo wakhtigaas kooban laga dalbo inuu ku fuliyo howlaha horyaalla dowlada. Iyo qodobka labaad oo ah kan ugu macquulsan xiligaan xasaasiga ah.
qodob kaas oo ah in aad loo dhimo awooda gaamudhay ee xerta Villa Somaliya, isla markaasna wasiirka koowaad oo ah nin ka haysta dhalasho wadamada reer galbeedka, kuna hadla labada luuqadood ee ugu wawayn reer galbeedka la siiyo awood buuxda oo uu ku meel mariyo howlaha fulinta, khariirad ay kuwada shaqeeyaana loo sameeyo madaxda dalka mudada kooban ee dowlada u harsan.
Dhanka kale dad aan badnayn oo indheer garad Soomaliyeed ah ayaa is weydiinaya waxa laga damacsanyahay dalka Somaliya hadii dowlada iminka ay ku guuldaraysato inay hirgaliso qodoba aan kor ku soo sheegnay ee ah,xoraynta gobolada, hirgelinta nidaamka federalism-ka iyo doorasho xor 2016-ka.
Indheer garadkaas aan badnayn waxay qabaan inaan meesha laga saarin karin fikirka ah in Soomaliya la hoos geeyo wasaayadda IGAD sanadka 2016-da, hadii ay dhammaato muddada jiritaanka maamulka dowlada federaalka ee xafiiska loo doortay madaxweyne Xassan, iska markaasna la qaban waayo doorashadii la ballan qaaday, sida danjiraha Soomaliyeed ee howl gabka ah Maxamed Cusmaan uu ku sheegay sheeko (Fiction) ama Khiyaali ah, balse uu aaminsanyahay Danjiruhu inay (Fact) xaqiiq noqon kadho waa hadii mudadaas kooban aan Somaliya wax iska bedelin.
Mashaariicayste	February 16, 2014 10:38 am
walle waa warbixin ku qotonta runta wax badan oo aan ogayna ii ifisay xasan sheekh maxamud waxa u furan inu is casilo oo xafiiska uu ka tago ama inuu golaha wasirada shaqada u daayo dowladihii lacagta goostayna loo tago oo la beryo inay dib usoo furan lacagtii
Reply mubarak maxamed	February 16, 2014 10:42 am
ar xasan sheekh maxamud waa ay ku daadsan tahay maantay allow adiga u maqan waxaa kla yaab leh shan malyan oo doolar oo bil kasta ay bixin jirtay dowlada turkiga iyo laba milyan oo bil kasta ay bixin jirtay dowladda imaaraadka xagee bay mareen ciidan laguma dhisin shaqaale lagama bixin wadooyin laguma dhisin yaab badana war nimanku caqli xumaa xagee lacagtaas bil kasta ay aadi jirtay yaa qaadan jiray yaa xadi jiray waa nasiib daroo in nimanka xamar degan ay dowladnimada ay ka fahmeen NGO waxaadna moodaa goortaa dhaqankooda aragtid inay ugu baxdo Non goverment organisation
hadaba waxaa xal ah baydhabo dowlad ha noqoto, puntland sideeda ha ahaato somaliland ha go’do ileen hawiye dowlad marabaane
Reply ubax	February 16, 2014 12:53 pm
xasan sheekh maxamuud xaaladu waa ay ku xun tahay isaga ayaana isku ka lifay inay sidaas ku ahaato kadib markii uu dadkii soomaaliyed ee wax garanayay uu dhaafsaday koox yar
Reply Puntlander	February 16, 2014 3:43 pm
Ma dhawayn markii aan ka quustay hogaanka Xassan Shiikh, waase beelo hadii la ila arkay iminka. kkk
Reply gol janno	February 16, 2014 9:18 pm
Madaxweynaha halaga daayo dacaayada.
eight + = 15	Wararka